Witch | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (အဖွဲ့) / Witch
ပွဲတော် Album (1)
၁. One Way – Hip Hop နဲ့အသက်ဆက် ၂. Plugပေါက် – ယောက္ခမ ၃. မညီမျှခြင်း – မညီမျှခြင်း ၄. Unrivalled – မှားနေတဲ့နေ့စွဲများ ၅. Generation – မမုန်းတဲ့ကြယ် ၆. ပွဲတော်အုပ် – မြို့ပြနဲ့ကျေးလက် ၇. Richard – နားလည်ပေးပါ ၈. Shell Shell – အသည်းကွဲ Stage Show ၉. Twist & Witch – လမ်းခွဲ ၁၀. Wanted – ငါ့ဂီတငါ့ဗီဇ ၁၁. City FM – Advertisement
May 30, 2009 Mad Computerist အဆိုတော် (အဖွဲ့) အခွေ (အများ) Myanmar Artist One Way Wanted Witch3Comments
ဗိုလ်လုပွဲ ( ၂ ) – အပိုင်း ၂
၀၁။ သဘောပဲ – Chili Family ၀၂။ အသည်းရက်စက်တယ် – Zinn Zin + Crab ၀၃။ ကောင်းကောင်းနေ – Upgrade ၀၄။ မနေ့ကအတိုင်းပဲ – ပလုပ်တုတ် + N ဆိုင်းလီ ၀၅။ ဇာတ်သိမ်းခန်း – Witch ၀၆။ ပြန်လာခဲ့ပါ – Oxygen ၀၇။ ခဏတော့ပြန်ခဲ့ – Smoke ၀၈။ ရင်ခုန်စွာတွေ့ခဲ့ရတဲ့နေ့ – Snapshot ၀၉။ ဥပေက္ခာတော့မပြုပါနဲ့ – Friday ၁၀။ စမ်းချောင်းသား – Ko Linn + Nat Kyaw ၁၁။ အညှော်သည် – MIB … Continue Reading →
February 4, 2009 ME *MMA* အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) Myanmar Artist Opposite Oxygen Witch3Comments
အိန်ဂျယ် Volume 1
၀၁။ ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက် – စိုင်းစိုင်း + သီရိဆွေ ၀၂။ အိပ်မက် မက်ခွင့်ရယုံနဲ့ကျေနပ်ရသူပါ – စင်ဒီ + ကြိုးကြာ ၀၃။ မယားကြောက် – Acid ၀၄။ ဟဲလို – ငယ်ငယ် ၀၅။ နားလည်မှု – ဂျေမီ + Jenny ၀၆။ အဆိုးမဆိုးနဲ့ – D.Beez ၀၇။ အချစ်မရှိမှဘဲ…ငါ – ရဲလေး ၀၈။ ထားခဲ့ပါ – ရည်မွန် ၀၉။ ပြတွင်းပေါက် – ဂျေမီ ၁၀။ ယုံမိတာငါအမှား – Witch
September 16, 2008 ME *MMA* အခွေ (အများ) စိုင်းစိုင်း စင်ဒီ ရဲလေး ရည်မွန် ငယ်ငယ် သီရိဆွေ D.Beez J-Me Jenny Myanmar Artist Witch5Comments